UDwight D. Eisenhower - i-Biography
UDwight D. Eisenhower yoBuntwana kunye neMfundo:
U-Eisenhower wazalwa ngo-Oktobha 14, 1890 eDenison, eTexas. Nangona kunjalo, washukunyiswa njengomntwana kuAbilene, eKansas. Wakhula kwintsapho ehluphekileyo kwaye wasebenza kulo lonke ulutsha lwakhe ukufumana imali. Waya kwizikolo zikarhulumente zasekuhlaleni waza waphumelela kwisikolo esiphakamileyo ngo-1909. Wajoyina umkhosi ukuze athole imfundo yeekholeji yamahhala. Waya eWest Point ukusuka ngo-1911-1915.
Wathunyiswa ummeli wesibini kodwa waqhubeka nemfundo yakhe emkhosini ekugqibeleni waya kwiKholeji yezoKhuselo.
Uyise kaEisenhower nguDavid Jacob Eisenhower, umatshini kunye nomphathi. Unina wayengu-Ida Elizabeth Stover owayengumntu onqabileyo ngokwenkolo. Wayenabazalwana abahlanu. Watshata noMarie "Mamie" iGeneva Doud ngoJulayi 1, 1916. Wayefudukela rhoqo kunye nomyeni wakhe kulo lonke elasemkhosini. Bonke babenonyana omnye, uJohn Sheldon Doud Eisenhower.
I-Dwight D. Eisenhower yeNkonzo yezoMkhosi :
Ekugqibeleni, u-Eisenhower wabelwa ukuba abe ngummeli wesibini kwi-infantry. Ngexesha leMfazwe Yehlabathi I , wayengumqeqeshi woqeqesho kunye nomlawuli weziko loqeqesho. Waya kwiKholeji yamaKhosi eMfazwe waza wajoyina abasebenzi baseGeneral MacArthur . Ngowe-1935 waya ePhilippines. Wayekhonza kwiindawo ezahlukileyo eziphambili ngaphambi kokuqala kweMfazwe Yehlabathi II . Emva kwemfazwe, wasula phantsi waza waba ngumongameli wase-Columbia University.
Wamiselwa nguHarry S Truman ukuba abe nguMlawuli oyiNtloko we-NATO.
IMfazwe Yehlabathi II:
Ekuqaleni kweMfazwe Yehlabathi II, uEisenhower wayeyinhloko yabasebenzi kuMlawuli oyiGeneral General Walter Krueger. Emva koko wanyuswa ukuba abe ngu-brigadier jikelele ngo-1941. Ngo-Matshi 1942 waba ngumphathi omkhulu. NgoJuni, wamiselwa umlawuli wamagosa onke ase-US eYurophu.
Wayeyinduna yemikhosi ehlangeneyo ngexesha lokuhlasela kweMntla Afrika , iSicily, neItali. Wayebizwa ngokuba nguMlawuli oPhezulu oPhezulu olawula i- D-Day ukuhlasela . Ngomhla kaDisemba 1944 waba yinkwenkwezi yeenkwenkwezi ezintlanu.
U-Eisenhower wakhethwa ukuba asebenze ithikithi yeRiphablikhi kunye noRichard Nixon njengeVengeli lakhe likaMongameli malunga noAdlai Stevenson. Bobabini abaviwa baphuphe ngamandla. Eli phulo lijongene noKhomishini kunye nenkunkuma yurhulumente. Nangona kunjalo, abantu abaninzi bavotela "Ike" ekhokelela ekunqobeni kwakhe ngama-55% evoti ethandwayo kunye namavoti angama-442. Wagijima kwakhona ngo-1956 ngokumelene noStevenson. Enye yemicimbi ephambili yayiyimpilo ka-Eisenhower ngenxa yokuhlaselwa kwintliziyo yakutshanje. Ekugqibeleni waphumelela ngama-57% evoti.
Iziganeko kunye nemiphumo ye-Dwight D. Eisenhower kaMongameli:
U-Eisenhower waya eKorea ngaphambi kokuba athathe i-ofisi ukuze ancede ukugqiba iintetho zoxolo. NgoJulayi ka-1953, i-Armistice yasayinwa ukuba iKorea eyahlukana ibe yimiba emibini kunye nommandla ochithwa ngamatyala kwi-38th parallel.
Imfazwe yeHlabathi yayidla ngoxa i-Eisenhower yayisesikhundleni. Waqala ukwakha izixhobo zenyukliya ukukhusela iMelika kunye nokulumkisa iSoviet Union ukuba i-US iyayibuyisela xa ikhutshwe. Xa uFidel Castro ethatha amandla eCuba waza waqala ubudlelwane neSoviet Union, u-Eisenhower wabeka i-embargo kwilizwe.
Wayekhathazekile ngokubandakanyeka kweSoviet eVietnam. Wenyuka kunye neDominino Theory apho wathi ukuba i-Soviet Union inokuphelisa umbuso omnye (njengeVietnam), kuya kufumana lula kwaye kulula ukuyiphonsa imirhulumente. Ngoko ke, wayengowokuqala ukuthumela abacebisi kummandla. Wadala i-Eisenhower Doctrine apho athembisa ukuba iMelika inelungelo lokunceda nayiphi na ilizwe elongelwa yintshukumo yamaKomanisi.
Ngowe-1954, uSeninkulu uJoseph McCarthy owayezama ukutyhila amaKomanisi ngoorhulumente wawela ngamandla xa i-Army-McCarthy yokuvalelwa kwathengiswa. UJoseph N. Welch omelela i-Army wakwazi ukubonisa indlela uMcCarthy ayeyilawula ngayo.
Ngomnyaka we-1954, iNkundla ePhakamileyo yenze isigqibo kwiBrown v. IBhodi yeMfundo yaseTopeka ngowe-1954 ukuba izikolo mazibekwe ngokwahlukileyo.
Ngo-1957, u-Eisenhower kwafuneka athumele umkhosi we-federal ukuya e-Little Rock, eAnsansas ukukhusela abafundi abamnyama ababhalisa okokuqala kwisikolo esiphezulu sonke esikolweni. Ngo-1960, uMthetho woLuntu wamaLungelo oLuntu udluliselwe ukubandakanya izigwebo kunye nawaphi na amagosa asekuhlaleni avimbela abamnyama ukuvota.
Isiganeko seSplane se-U-2 senzeke ngo-1960. Ngomhla ka-Meyi 1, 1960, uhambo lwe-U-2 oluhlola uFrancis Gary Powers lwahlulwa kufuphi neSvedlovsk, Soviet Union. Esi siganeko sasinempembelelo engapheliyo kwi-US-USSR ubudlelwane. Iinkcukacha ezijikeleze esi siganeko zize kube zimihla. Noko ke, u-Eisenhower, wayekhusele imfuneko yokubhenela inqwelo-moya njengoko kuyimfuneko ukhuseleko lwesizwe.
Ixesha lePresidential Pre-Presidential Period:
U-Eisenhower wasethatha umhlalaphantsi emva kwekota yakhe yesibili ngoJanuwari 20, 1961. Wathuthela e-Gettysburg, ePennsylvania waza wabhala i-autobiography kunye neememori. Wafa ngo-Matshi 28, 1969 we-congestive heart failure.
U-Eisenhower wayengumongameli ngexesha lama-50, ixesha loxolo olunxulumene (naphezu kweKoreph Conflict ) kunye nokuchuma. Ukufuna kuka-Eisenhower ukuthumela imikhosi yamagunya e-Little Rock, eAnsansas ukuqinisekisa ukuba izikolo zendawo zahlukelwa yinyathelo ebalulekileyo kwiNkcubeko yamaLungelo eSintu .
Amazwi kaJames Monroe
UWilliam Henry Harrison Facts Fast
Iingcaphuno zikaJames Monroe
UWoldrow Wilson - Mongameli Weshumi Amabini anesibhozo we-United States
I-Biography kaSally Jewell, owayengumNobhala waseMelika waseMelika
Izinto ezi-10 eziphezulu zokumazi ngoJakobe Monroe
Imifanekiso neenyaniso malunga nabaPhathiswa be-United States
Umnxeba oMandla oTywala
Iipropati ze-FRP Composites
Iimpawu eziqhelekileyo zamaSulumane kunye namaArabhu kwiTV nakwiFilimu
Imvelaphi kunye neMbali Yokuqala yeTennis
I-Crystal Starfish Ornament okanye UkuHlangiswa
Indlela yokudibanisa iGehena (ukuya kwiJamani)
Daffodil Magic, Legends, kunye neNkcubeko
Yiyiphi i-Point Shaving
I-Montgomery Bus Boycott Isihlandlo
IiHlabathi zeHlabathi zeGalofu
Iintlanzi ezili-10 eziphambili ze-Caterpillars kwi-Garden Butterfly
Abadlali beMartial Greatest All Time
Ukuba Uthanda 'iMemoirs of Geisha', Zama ...
Yintoni umzekelo weConpac Couplet?
I-University of Mary Mary University of GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
UTommy Douglas, waseCanada 'uYise weMatherapy'